सौतेनि आमाको कतुर्त ! आखिर के गल्ति थियो यो बालकको ! ::
सौतेनि आमाको कतुर्त ! आखिर के गल्ति थियो यो बालकको !
आमा बाबुको एक्कासि आएको प्रस्तावले अर्चना झस्किन पुगी । मुटु जोडले काँप्यो । एकछिन मौन रही । केही छिनको मौनतापछि ऊ होसमा आई । उसले अनुरोध गरी ‘आमाबुबा’सँग विन्ति बिसाई । आमा बाबुले पनि छोरीको इच्छालाई मध्यनजर गर्दै छोरीको प्रगति उन्नति हेर्नकै लागि इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउनकै लागि केटा पक्षलाई अहिले पढ्दै छे । विवाह गर्दिन भन्छे छोरी सजिलै टार्दिए ।
हरि थापाद्धारा लिखित रातोपाटीमा प्रकाशित कथा
ऊ असाध्य गदगद भई । मनमनै धन्यवाद दिई । गर्वले छाती फुलेर बडेमानको भएको महसुस गरी । उत्ता बाआमालाई मनमनै थकथकी लागिरहेको थियो । केटा परिचित कुल घरानको खानदानी थियो । अब यस्तो केटा आउला, नआउला चिन्ता भने यथावत कायम रह्यो । छोरीको इच्छा जायर भएपछि आमाबुबा नै मौन रहे ।
लेखकः हरि थापा
एउटा बाहुन केटी दलित केटासँग भागी भन्ने खबर पाएपछि एककान दोकान मैदान मान्छेहरु हल्लाको पछि लागिरहे । गाउँसहर पुरै दुर्ग्न्धित भयो । भट्टि पसलदेखि चौतारासम्म तीतो आवाज कान पाकुनजेल गुन्जिरहन्थ्यो ।
आमाले छाडेपछि सदाबहार खुसी हुने खुसिदिने सपना चकनाचुर भयो । अब अर्चनाको आफ्नो भन्ने प्रेमबाहेक कोही रहेनन् । बाबा र समाज सधैँ अर्चनाको विरुद्धमा लागिरहन्थे । आफ्ना बाबा हुन सायद समाजको लागि देखावटी पुरुषत्व देखाएका थिए होला । प्रतिष्ठाको जगेडा गरेका थिए होला । जब सौतेनी आमा भित्र्याएपछि साच्चिकै बाले छोरी सजिलै विर्सि्दिए । छोरीको नामले तर्सिने सौतेनी आमा नामसम्म सुन्न चाहन्थिनन् ।
विनागल्ती पनि उसले सौताको लात्ती र थप्पड खानुपर्यो । सौतालाई कमजोरी भएकै कारण कुनै गुनासो गरिन तर पनि सौता सौता हुने रहेछन । उसले कहिल्यै दोहोरो बात गरिन । तर पनि पटक पटक पीडा पाई ऊ झनझन कमजोर हुँदै गई । स्वर्गीय आमालाई कैयाँैपटक सम्झी । आमा भएको भए पक्कै उसले न्याय पाउँथी तर अहिले उसको पक्षमा कोही थिएनन् । पाउनु जति पीडा पाई । गल्तीको सजाय भोग्दै थिई । दलित सँगको प्रेम नै जीवनको पहिलो त्रुटि भयो, उसले मनन गरी । साच्चिकै प्रेमले जात जनाएरै छाड्यो । उसका लागि घर, परिवार, समाज सारा त्यागी तर प्रेमले ती सब कुरा सजिलै बिर्सि्दियो । निर्दोष नारीमाथि सौताको गोली हान्यो ऊ घाईते भई ।
उता माइतमा पनि बाबाले सौतेनी आमा भित्र्याइसकेका थिए । उमङ्गको जीवन जिउँदै छन् भन्ने खबर सुनेकी थिई । उसले झिनो आस गरेकी थिई पक्कै पनि आमाको माया सौतेनी आमाले दिन्छिन्न् भन्ने तर उसको आगमनले त छोरीको नाम लिए पनि घर छाड्ने आदेश भएछ । बाले त आमाको मृत्युपछि सम्झेका थिए रे । तर सौतेनी आमाको शासनमा घर ब्यबहार चल्न थालेपछि पूर्ण्विराम लागेछ ।
सिन्धुलीका प्रहरी र सेना उत्कृष्ठ
बजेट अभवामा ऐतिहासिक मन्दिरको जिर्णोद्वार कार्य रोकियो
दुधमा आत्मानिर्भर बनाउने योजनामा मरिण गाउँपालिका
कोदोको मुल्य बढ्यो
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी परिर्वन गर्ने म्याद सकियो
ईमेल : ra[email protected]